मोदीले सुन्नू, जीउमा बम बाँधेर दिल्ली आउन नपरोस्-छिरिङ दाहाल - खबरम्यागजिन
HomeBreaking Newsमोदीले सुन्नू, जीउमा बम बाँधेर दिल्ली आउन नपरोस्-छिरिङ दाहाल
‘गोर्खाल्याण्ड हाम्रो लक्ष्य हो, तर गोर्खाल्याण्ड सहिद बनाएर हुँदैन, अब नयाँ रणनीति बनाउनुपर्छ, नयाँ तरिका अप्नाउनुपर्छ।’
हिजो मेला ग्राउण्डको जनसभामा मोर्चा नेतृ छिरिङ दाहालले यसो भनेकी हुन्। उनले विमल गुरुङले हिंसाको आन्दोलन गरेकैले जनताले दुःख पाएको बताइन्। भनिन्, ‘विमल गुरुङले हिंसा गरेर, जनतालाई सहिद बनाएर आन्दोलन पनि बिगारे, मुद्दा पनि बिगारे।’
यद्धपि आफूहरूले विमलको बाटो नपछ्याउने किटान पनि गरिन्। ‘मलाई त रातभरि निद्रा लाग्दैन। गोर्खाल्याण्ड भनेर जनतालाई कति ढाँट्नु? अब हामी ढाँट्दैनौं। गोर्खाल्याण्ड भनेर कसैको एक थोपा रगत पनि बगाउँदैनौं,’ उनले स्पष्ट पारिन्।
उनले गोर्खाल्याण्ड नहुनुमा सबैभन्दा ठूलो दोष भाजपाको रहेको किटान पनि गरिन्। ‘देशमा 28 वटा पार्सियल्ली एक्सक्लुडेट एरिया छ, त्यसमा दार्जीलिङ पनि एउटा हो,’ भनिन्, ‘27 वटाले ठेगाना पायो तर हामी छोडियौं। हामी जमिनसितै आएकोलाई भाजपाले किन अन्याय गर्छ?’
अबोप्रान्त तेरोमेरो भन्ने भावनाले होइन ‘हाम्रो’ भन्ने भावनाले आन्दोलन गर्नुपर्ने पनि बताइन्। विमल गुरुङको गलत रणनीतिको कारण लक्ष्यमा पुग्न नसकेको ठहर गर्दै उनले आफूहरू सही रणनीतिसित गोर्खाल्याण्डको निम्ति अघि बढ्ने बताइन्।
‘ममता व्यानर्जीले छुट्टै राज्य राज्य सरकारको विषय होइन भनेर भनिसकेकी छन्,’ उनले भनिन्, ‘खै त भाजपा सरकारले हामीलाई न्याय दिएको? अब भाजपाको अन्याय सहँदैनौं।’ उता बोडोल्याण्डका आन्दोलनकारीहरूले बोडोल्याण्डको लागि आत्मदाह गर्नेसमेत घोषणा गरिसकेको सुनाउँदै भनिन्, ‘बिटिसीका आन्दोलनकारीहरूले जस्तो ज्यान दिन्छु त म भन्दिन तर अर्कै तरिकाले आन्दोलन गर्नेछौँ।’
यतिभन्दा भन्दै पनि उनले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नाम लिँदै खबरदार पनि गरिन्। भनिन्, ‘बोडोल्याण्डसितै गोर्खाल्याण्ड पनि भएन भने नरेन्द्र मोदीले याद राख्नु, सावित्री र इण्द्राणीको इतिहास दोहोऱ्याउन नपरोस्। जिउमा बम बाँधेर दिल्ली जान नपरोस्। हामीलाई आतङ्कवादी बनायो। अब विछिन्नतावादी, आतङ्कवादी बन्दैनौं। यस्तो रणनीति बनाउनेछौं जसले इतिहास कायम गर्नेछ।’